M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka soo horjeestay go’aankii madaxda dowlad goboleedyada… – Hagaag.com
M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka soo horjeestay go’aankii madaxda dowlad goboleedyada…
Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin Xaaji Cumar Camey ayaa qaadacay go’aankii Madaxda dowlad goboleedyada ka soo saareen magaalada Kismaayo, kaasoo ay ku hakiyeen wada shaqeyntii kala dhaxeysay dowladda Federaalka.
C/xakiin Camey oo caawa wareysi siiyay Idaacada Kulmiye ee fadhigeeda yahay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in go’aanka Kismaayo aan lagala tashan, isla markaana aanu ku raacsaneyn.
Mr Camey ayaa sheegay in eedeymaha qaar ee Maamul goboleedyada u soo jeediyeen dowladda Federaalka uu yahay mas’uuliyad laga rabo maamul goboleedyada inay iyaga fuliyaan.
“Qodobka Amniga oo kale eedeymo Madaxda maamulada leeyihiin bey dowladda Federaalka rabaan inay saaraan oo ay ku camcamiyaan, maamul goboleed asiga ka mas’uul ah amniga deegaanada uu ka mas’uulka yahay, ma ahan in dowladda Federaalka ay dusha ka saaraan”ayuu yiri C/xakiin Camey oo qiray inay jiraan waxyaabo ay gabeen Maamul goboleedyada.
Waxaa uu soo jeediyay in la wada fariista oo miiska wada hadalka la isku yimaado, iyadoo aan saxaafada la isku marin eedeymo sida uu yiri.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin Camey ayaa xiriir dhow la leh dowladda Federaalka, iyadoo dhowr jeer booqasho iskiis ah ku yimid magaalada Muqdisho, inkastoo isaga iyo Madaxweyne C/weli Gaas ay meelo qaar ku kala aragti duwan yihiin, hadana waxaa loo arkaa nin aad uga dhow dowladda Federaalka marka loo eego C/weli Gaas.